अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२२ मा बिवाह गर्ने योजना छ ? यि ५ राशिका लागि छ अति उत्तम – List Khabar
Home / समाचार / अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२२ मा बिवाह गर्ने योजना छ ? यि ५ राशिका लागि छ अति उत्तम
admin December 29, 2021 समाचार Leaveacomment 88 Views
वार्षिक वैवाहिक राशिफल २०२२ अनुसार नयाँ वर्षले पाँच राशिका मानिसको जीवनमा खुशी ल्याउने छ । यी राशिका व्यक्तिहरूले राम्रो जीवनसाथी मात्र नभई शुभ विवाहका लागि बलियो योग पनि बनेको छ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार शनि र बृहस्पतिले आशीर्वाद दिएमा मात्रै विवाह योग बन्ने गर्दछ । आउँदै गरेको वर्षमा शनि र बृहस्पति कुन राशीका मानिसलाई खुसी पार्नेछन् । कुन राशिका व्यक्तिको घरमा विवाहको वाजा बजाउने प्रबल सम्भावना हुन्छ ।
१ कर्कट : कर्कट राशिका लागि नयाँ वर्ष जीवन साथीको खोजीमा महत्वपूर्ण रहनेछ। शनी तपाइको विवाह भाववाट गोचर गर्नेछ जसले अप्रिलमा अर्को घरमा जानु अघि तपाईंको प्रयासहरूलाई बलियो बनाउनेछ। जुलाई महिनामा तपाईको विवाह गृहमा शनिको स्थितिले वैवाहिक जिवनमा आउने सबै बाधा र विवादहरू समाप्त हुने देखिन्छ। प्रेम विवाह गर्न चाहनेहरुका लागि यो वर्ष भाग्यशाली साबित हुनेछ ।
२ सिंह : सिंह राशिका लागि नयाँ वर्षमा विवाहको प्रबल सम्भावना छ। वर्षको प्रारम्भमा, उनको जीवनमा विशेष व्यक्तिले प्रवेश पाउने सम्भावना छ । अप्रिल महिनामा यस राशिका व्यक्तिहरुको विवाह हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ । अप्रिलमा शनि तपाईंको विवाह गृहमा गोचर गर्नेछ र जुलाईसम्म रहनेछ। यस अवधिमा, शनि ग्रहले तपाईंलाई तपाईंको जीवनको कर्मसँग जोड्न मद्दत गर्नेछ। अर्कोतर्फ, सन् २०२२ पहिले नै प्रेममा रहेकाहरूका लागि पनि शुभ रहनेछ।
३ कन्या : कन्या राशिका लागि नयाँ वर्षमा केही ग्रहहरूको गोचरले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ। तपाईको खोज वर्षको पहिलो चौमासिकमा समाप्त हुने सम्भावना छ। यस अवधिमा तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूसँग जतिसक्दो चाँडो विवाह गर्न सक्नुहुन्छ। यस बाहेक यस वर्ष शनिले तपाईको पारिवारिक घरमा ग्रहण गर्नेछन् जसले गर्दा २०२२ मा विवाहको प्रबल सम्भावना छ।
४ वृश्चिक : विवाह वार्षिक राशिफल २०२२ अनुसार वृश्चिक राशिका लागि पनि यो वर्ष निकै सुखद रहने छ । जे होस्, तपाईले जिवनसाथी खोज्न संघर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर जुलाई पछि, चीजहरू तपाईको पक्षमा जान थाल्नेछ किनभने यस समयमा शनि र बृहस्पति दुबै तपाईको राशिमा रहनेछन्, जसका कारण तपाईको जीवनमा नयाँ ब्यक्तिको आगमन हुनेछ। दीर्घकालीन र स्थिर साबित हुनेछ।
५ मीन : मीन राशिका लागि अप्रिल पछि बृहस्पति तपाईको राशिमा गोचर हुनेछ। यसले तपाईंको विवाहको घरलाई असर गर्नेछ, जसका कारण यो वर्ष तपाईंको विवाहको प्रबल सम्भावना छ। जो मानिसहरु आफ्नो लागि परफेक्ट जिवनसाथीको खोजीमा थिए, यो वर्ष उनीहरुको खोजी समाप्त हुनेछ किनभने उनीहरु चाँडै यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकपछि विवाह गर्नेछन् ।
Previous खस जातिले माग्यो मष्ट पूर्णिमामा सार्वजनिक विदा
Next सेल्फी रोडमा यसरी हुँदोरहेछ यौ’नक्रिया ! एक जोडी रंगेहात प’क्राउ